La heli karo Slax 7 "Gees Cagaaran" | Laga soo bilaabo Linux
Nooca 7.0 ee slax, qaybinta taas oo horeyba waxaan ku wada hadalnay balooggan taasina waxay na siineysaa xirmo xirmooyin dhameystiran 210MB oo kaliya.
Slax ayaa la socota KDE 4.9.4, Isku-duwaha GCC, in ka badan 40 deegaan iyo xulashooyinka luqadda iyo tan codsiyada ah. Waxyaabaha cajiibka ah ee ku saabsan qaybintaan ayaa ah inay siiso deegaan Desktop dhameystiran isticmaalkiisuna aad u hooseeyo.
Waxaad kala soo bixi kartaa luqadda aad jeceshahay xiriiriye:
Soo Degso Slax
Waxaan qorsheynayaa inaan soo dejiyo iso caawa si aan berri u tijaabiyo oo aan sameeyo dib u eegis yar 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Available Slax 7 «Green Horn»
Shaki la'aan qaybinta oo dhammaystiran, waa wax laga xumaado in ay luntay, maxaa yeelay aad ayey ugu wanaagsan tahay shaqooyinkeeda, xaqiiqdii waxay ka muuqataa filimada sida "Shabakadda bulshada", taas oo muujineysa in muddo cayiman ay wax badan jiidatay.
Waxa aan ku arkay filimkaasi wuxuu ahaa KDE 3.5, sidee ku ogaatay inuu ahaa mid jilicsan?
Elav weyn !! Waxaan sugi doonaa Dib-u-eegista, ka dibna, haddii ay i qanciso, sidoo kale waan isku dayaa. Aniguna waxaan u dhexeeyaa Slax iyo Slitaz ..
Slitaz waa inuu shaki la’aan noqdaa, waxaan u maleynayaa inay sii wado adeegsiga sanduuqa furan iyo waxyaabaha qaar oo ka socda LXDE, waxa aan ka jeclahay Slitaz waa maareeyaha xirmada qaabkeeda ku habboon (tazpkg), waxayna leedahay codsiyo ku wajahan mashiinno aan awood badan lahayn oo ku jira keydkeeda, waa mid aad u fiican mini-distro, mid kale oo fiican waa TinyCore, ma aanan arkin muddo dheer, taasi waa durbaba micro-distro.
Immisa ayaa la dhimay isticmaalka?
Si la yaab leh waxa qofku uusan fileynin inuu ku arko KDE oo leh saameyn firfircoon 😀
La rakibay oo aan saameyn ku jirin markii la bilaabayo waxay igu qaadataa 260 mb. waxyar ka yar Arch, laakiin waxaan dareemayaa in Slax uu dheecaan badan leeyahay.
Hagaag hada waxaan ugu shubay mashiin dalwad leh 256MB oo RAM ah waana duulayaa! 😀
shalay waan soo dajiyay oo waxaan ku rakibey USB-ga, laakiin waxa kaliya oo ay rartaa tilmaame iyo asal madow hahahaha khadka amarku si fiican ayuu u shaqeeyaa, yaa garanaya, malaha waa sababta oo ah waxaan ku soo degsaday sibibiska Isbaanishka… ..
Waan jeclahay Slax. Haddii aanan khaldamin tani waa nooca ugu horreeya ee leh KDE4, sax? Waxay aad uga daaheen isku dariddooda.
Xaqiiqdii, sifiican ayaa loo safeeyey marka loo eego noocii hore, in kasta oo aan ka helay KDE 3.5. Dhinac waxay jareen codsiyada (laga yaabee inay yareeyaan culeyska distro) iyagoo kaliya uga tagaya waxyaabaha muhiimka ah, inta hartay keydka (oo aan wali shaqeynin), in kasta oo biraawsar kale oo miisaanka yar sida Qupzilla (keenaya Firefox) wanaagsan. Dhinaca «farshaxanka» waa wax aad u fiican, laga soo bilaabo bootloader-ka ilaa desktop-ka. Hada uun la bilaabay waxay ku fadhidaa qiyaastii 220 MB (xulashada ikhtiyaarka "copy to ram" bilowga). Ma aqaano inay tahay mashiinkeyga laakiin waqti ka dib wuxuu lumiyaa "jawaab", su'aal kama taagna xusuusta (ma isweydaarsanayo isweydaarsiga), waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay pendrive-ka. Waxa kaliya ee ka maqan ayaa ah in la arko wixii ay ku sameeyeen "Xarunta softiweerka", qaababkii hore su'aasha ah "modules" aad bey u habeysneyd. Xaqiiqdii waxay u qalantay sugitaanka.
Weli waxaan haystaa CD leh Slax Kill Bill oo dhawr sano ka hor ah… Waxaan u isticmaali jiray inaan ku badbaadiyo faylalkeyga markii Windows-kaygu burburo. Waxay ka mid ahayd CD-yadaas dhibaatadaada ku xalliyay xaaladaha argagaxa. Hehehe .. Waa maxay waqtiyada.
sidee fiican! Waxaan u maleynayay in mashruucu dhintay, waqti dheer ayey ku qaadatay inay soo saaraan nuqulkan
Waxaan ku hayaa dhammaan noocyada aan u baahanahay ee faylka ku jira. Sidee caajis u tahay inaad iskudaydo sidan oo kale